"Imikhuhlane kakhulu ngokuvamile ogulayo. ukuthi yini okumele uyenze?"Impendulo ithi,!
ukhona lapha: Ikhaya amathiphu "Imikhuhlane kakhulu ngokuvamile ogulayo. ukuthi yini okumele uyenze?"Impendulo ithi,!
Kusukela ebuntwaneni sonke siyazi izimpawu zomkhuhlane ngokuphelele ezingemnandi: prostration, lokushisa, amakhaza, ukhwehlela, amathambo bezwe izinhlungu kanye nezinye 'izintelezi "enjalo. Abantu abadala ngokuvamile bagule kancane kaningi, kunezingane, kodwa awukwazi ukusho, ukuthi kuba lula ukuze azivikele amagciwane umkhuhlane nezinye izifo.
Namuhla sizoxoxa, nendlela yokuzigwema ukuze zingasivimbi ukubuya okuqala lesi sifo ngemva zizakuthobela ephulukisa nje. Izinkinga - ingxenye ezingemnandi kunayo umkhuhlane, ngoba liyochukuluza ukwenyuka kwesibalo sabantu nezifo ezingamahlala, futhi kungaholela ekwakhiweni new sokugembula the viscera. On the nokwelashwa umkhuhlane chiayte esihlokweni esizeni lethu – http://forcys.ru/article/chastye_prostudy_u_vzroslyh-74/.
ngakho, ingozi izinkinga kanye nezifo sokuphinda okusezingeni, uma:
lokushisa lapho lesi sifo liye lehla - isibonakaliso nokwehla izivikelo zomzimba nokuvikeleka;
ugula isikhathi eside 7-10 izinsuku, kanye nentuthuko zingezesikhashana;
ukhwehlela Kutfutfukisa futhi uyaphikelela.
Uma indlela esetshenziswa zokwelapha ziye kungase kutholakale kuwufanele kwabo umkhuba,, kumelwe kuqala uvakashele udokotela. Mhlawumbe, noma esimweni lapho amalungiselelo kahle noma esingafanele, iphutha ukwelashwa zemithi, noma izinkinga ezijulile lomzimba wakho.
inothi, isimo sengqondo futhi kunomthelela enkulu kakhulu ijubane alulame. I engenathemba more umoya wakho elingaphakathi, ubuthakathaka izivikeli mzimba zakho. Futhi, umzimba uyakudinga ukuphumula efanele, kungenjalo lapho kuzothatha amandla ukuze azivikele izifo kanye nomsebenzi wokuziphilisa omuhle?
Yezinkinga imikhuhlane kungaba otitis, sinusitis, Ukucinana kwemigudu yomoya emaphashini, inyumoniya, kanye nokwelashwa yanoma iyiphi yalezi izimo kungase kudinge force ngaphezulu, nje kokunakekela ngempilo yabo siqu ukuze avimbele ukuthuthukiswa yezinkinga.
Uma inkulumo ethi "imikhuhlane kuvame ogulayo, ukuthi yini okumele uyenze - abazi "ngawe, sezinyathelo ezibaluleke kufanele zithathwe ngokushesha ukuze combat imikhuhlane. Lokhu kuzosiza izidakamizwa Fortsis ezintsha - lozenges nge ephumelelayo polyphenol complex.
Lezi izinto basuke wasibekela amagciwane namagciwane, ungavumeli ukuba badlulele, ekuvimbeleni ukuqhubekela phambili kwaleso sifo. Yingakho ukuphumelela Fortsis, kuqhathaniswa nemithi eminingi ekhemisi, okuningi ephakeme.
Fortsis usizo Ungazivikela kanye nabathandekayo ngenxa yamakhaza phakathi nenkathi futhi amandla ingxenye nge sifo ngokushesha, uma isifo selwenzekile kakade. Fortsis - imithi yesimanje kulabo, umuntu ofuna ukuphila ngaphandle imikhuhlane!